IATA ibuya isiqinisekiso seDijithali ye-COVID yaseYurophu njengomgangatho wehlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » IATA ibuya isiqinisekiso seDijithali ye-COVID yaseYurophu njengomgangatho wehlabathi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-DCC ihanjiswe ngexesha lokurekhoda ukunceda ukuvumela ukuvulwa kwakhona kwamazwe e-EU ukuba ahambe. Kwimeko yokungabikho komgangatho omnye wehlabathi wezatifikethi zokugonya zedijithali, kufanele ukuba isebenze njengesicwangciso sezinye izizwe ezifuna ukumilisela izatifikethi zokugonya ezidijithali ukunceda ukuhambisa uhambo kunye nezibonelelo zalo zoqoqosho ezinxulumene noko.
Isatifikethi se-EU Digital COVID sinokuguquguquka ekusetyenzisweni kuwo omabini amaphepha kunye nefomathi yedijithali.
Ikhowudi ye-EU Digital COVID yeSatifikethi se-QR inokufakwa kwifomathi yedijithali nephepha.
Isatifikethi se-EU Digital COVID siyaphunyezwa kumazwe angamaLungu angama-27 e-EU.
Umbutho wezoThutho loMoya waMazwe ngaMazwe (i-IATA) uyincomile iKhomishini yaseYurophu ngobunkokheli bayo kunye nesantya sokuhambisa isiQinisekiso se-EUV se-COVID (DCC) kwaye ibongoza amazwe ukuba awenze umgangatho wawo jikelele kwizatifikethi zokugonya ngedijithali.
UConrad Clifford, uSekela Mlawuli-Jikelele we-IATA
“I-DCC ihanjiswe ngexesha lokurekhoda ukunceda ekuvuleni kwakhona amazwe e-EU ukuba ahambe. Ngaphandle komgangatho omnye wehlabathi wezatifikethi zokugonya ezidijithali, kufanele ukuba isebenze njengesicwangciso sezinye izizwe ezifuna ukumilisela izatifikethi zokugonya ezidijithali ukunceda ukuhambisa uhambo kunye nezibonelelo zalo ezinxulumene noko kwezoqoqosho, utshilo uConrad Clifford, IATAUSekela Mlawuli-Jikelele.
I-EU DCC ihlangabezana neenqobo zokugweba eziphambili ezichongwe njengezibalulekileyo ukuba isatifikethi sokugonya sedijithali siza kusebenza:
format: I-DCC inokubanakho ukuba bhetyebhetye ukusetyenziswa kuzo zombini iifomathi zephepha kunye nezedijithali.
QR ikhowudiIkhowudi yeDCC QR inokufakwa kwifomathi yedijithali nephepha. Inolwazi olufunekayo kunye nokusayinwa kwedijithali ukuqinisekisa ukuba isatifikethi siyinyani.
Ukuqinisekisa nokuqinisekisa: I Komishoni yaseYurophu wakhe isango apho idatha ebhaliweyo isetyenziselwa ukusayina iiDCC kwaye ifunwa ukungqinisisa iisiginitsha zesatifikethi ezinokuhanjiswa kwi-EU iphela. Isango linokusetyenziselwa ukuhambisa idatha efihliweyo yabanikezeli bezatifikethi ezingezizo ze-EU. I-EU ikwaphuhlisile inkcazo yemigaqo yokuQinisekiswa kweMigaqo yokuhamba yokuhamba kwelizwe.
I-EU DCC iyaphunyezwa kumazwe angamaLungu angama-27 e-EU kwaye izivumelwano ezininzi ziye zavunyelwana nezinye izatifikethi zokugonya, kubandakanya iSwitzerland, iTurkey neUkraine. Kwimeko yokungabikho komgangatho omnye wehlabathi wezatifikethi zokugonya zedijithali, ukuya kuthi ga kuma-60 amanye amazwe afuna ukusebenzisa imigaqo yeDCC kwizatifikethi zawo. I-DCC ngumzekelo obalaseleyo njengoko ihambelana nesiKhokelo soMbutho wezeMpilo weHlabathi kwaye ixhaswe ngokupheleleyo yi-IATA Travel Pass. Enye inzuzo yeDCC kukuba yenza ukuba abanini bakwazi ukufikelela kwiindawo ezingezizo zokuhamba ngenqwelomoya eYurophu ezifuna ubungqina bokugonywa, njengemyuziyam, iminyhadala yezemidlalo kunye neekonsathi.
I-IATA inqwenela ukunika intsebenziswano yayo kwiKhomishini ye-EU nakweliphi na ilizwe elinomdla lokuqhubeka nokudibanisa iDCC kwiinkqubo zenqwelomoya ukuze zikhuseleke kwaye zingabinamthungo amava abakhweli, njengenkxaso yokuchazwa kwedatha yobuqu.